तालिकामा, तपाइँ सधैँ एक व्यापारी भेट्टाउनुहुनेछ, जसले7खेलाडीहरूको विरुद्धमा प्ले गर्दछ। खेलको उद्देश्य तपाईँको कार्डहरूसँग सम्भव भएसम्म 21 नजिकको नजिक छ, बिना हिसाब - यो भन्न सकिन्छ कि 21 भन्दा बढी छ। यदि तपाईं बिस्तार गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तुरुन्तै तपाईंको शर्त गुमाउनुहुनेछ। एकै समयमा, तपाईंलाई व्यापारीको हात हराउन आवश्यक छ। यदि तपाईंको हात जित्छ भने, तपाईंले एक भुक्तानी पाउनुहुनेछ।
यो ब्लेक तालिका - कुञ्जी विवरणहरू हेर्नुहोस्
ब्ल्याक ज्याक टेबलका सबै महत्त्वपूर्ण विवरणहरू वर्णन गरियो
प्रत्येक सीटका लागि, त्यहाँ एउटा बाकस हो जहाँ प्लेयरले उनीहरूको शर्त राख्न सक्छ। कार्डहरू यसका साथ प्रत्यक्ष रूपमा निलम्बित छन्
खेलको मानक संस्करणमा, डीलरका कार्डहरू व्यवहार गरिएका छन्, दोस्रो कार्डको मूल्य सुरुमा लुकेको छ
ब्लैकज्याक टेबलको बेटिंग सीमा र जीत र भुक्तानीको लागि भुक्तानी
कार्ड जुत्ता - व्यापारीले यहाँबाट कार्ड खिच्दछ। अनलाइन खेलहरूमा, यो वस्तुतः गरिन्छ
तालिकाको बीचमा, मुख्य भुक्तानी र नियमहरू खेलाडीहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखिने छन्
अनलाइन ब्ल्याकज्याकमा, खेलाडीले यहाँ सबै उपलब्ध चालहरू चयन गर्न सक्दछ
यो खेलमा कार्डहरूको मान बुझ्न सजिलो छ। सबै संख्या कार्डहरूसँग समान मान छ, र अनुहार कार्डहरू, जैक, रानी र राजाले सधैं 10 को रूपमा गणना गर्छ। केवल विशेष कार्ड मूल्य Ace हो। यसले 1 वा 11 को रूपमा गणना गर्न सक्छ। एस को मूल्य सधैं खेलाडीको पक्षमा हुन्छ।
ब्ल्याक ज्याकमा प्रत्येक कार्डको मान
यदि तपाइँ डीलर भन्दा बढी बिन्दुहरू जित्नुभयो भने, वा यदि डीलर बसहरू, तपाइँले 1 को पेआउट पाउनुहुन्छ: 1। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईं £ 10 शर्त गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ त्यो फिर्ता पाउनुहुन्छ, साथै एक £ 10 लाभ, कुल भुक्तानी £ 20 बनाउन। अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ डीलर भन्दा कम बिन्दुहरू संग खेल समाप्त गर्नुहुन्छ वा यदि तपाईं बस्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको शर्त गुमाउनुहुनेछ। यदि तपाईंको पहिलो2कार्डहरू एक्अस, प्लस एक 21, जैक, रानी वा राजाको साथ 10 बराबर हुन्छ भने तपाइँसँग "ब्ल्याकज्याक" छ। यस अवस्थामा, तपाईले तुरुन्तै3को पेआउटको साथ जित्नुहुन्छ: 2। त्यसैले यदि तपाइँ £ 10 शर्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यो फिर्ता पाउनुहुनेछ, प्लस £ 15 लाभ, £ 25 को कुल भुक्तानी गरेर।
चरण कसरी चरण कसरी प्ले गर्ने निर्देशनहरू
प्रत्येक दौरले डीलरले घोषणा गरेको छ कि खेलाडीहरुले आफ्नो शर्त राख्नु पर्छ। जो कोहीले खेल्न चाहानुहुन्छ जो शर्तमा राख्नुपर्दछ, जुन न्यूनतम र अधिकतम तालिका सीमाहरूमा छ। एक खेलाडीले वैकल्पिक रूपमा गेमबाट बाहिर निस्कन सक्दछ, भन्नुहोस् यदि उनी शायद सिगरेट वा पेयको लागि ब्रेक चाहनुहुन्छ भने।
सबै शर्त पछि राखिएको छ, व्यापारीले कार्डहरू सम्झौता गर्न थाल्छ। प्रत्येक प्रत्येक खेलाडीले एक कार्ड प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि डीलर आफैले एक कार्डलाई सौन्दर्य गर्छ। त्यसो भए प्रत्येक खेलाडीले दोस्रो कार्ड ठिक्यो। डीलरको दोस्रो कार्ड अनुहारमा राखिएको छ, त्यसैले मूल्य सुरुमा लुकेको छ।
खेलाडीको पहिलो निर्णय - बीमा वा होइन?
जब डीलरले एस छ भने, खेलाडीले कार्डमा ब्याट्री बिदा गर्न सक्दछ, एक खेलाडीले 1 विकल्पहरूको4बाट छनौट गर्न सक्छ - हिट, स्ट्यान्ड, डबल वा बिल्टिट। तथापि, यो निर्णय गर्नु अघि, बीमा शर्त हुन सम्भव हुन सक्छ। यो प्रकारको पक्ष केवल उपलब्ध छ यदि डीलरको पहिलो कार्ड एक अङ्क हो। यस अवस्थामा, डीलरले कालो ज्याक गर्ने मौका पाउँछ, जस्तै कि दोस्रो, छिटो कार्डले 10 को मान हुन सक्छ। तपाईं आफैलाई डाक्टर भएको बिरुद्ध बीमा गर्न सक्नुहुनेछ, मूल शर्त को मूल्य निर्धारण गरेर। यी चिप्स सामान्यतया तालिकाको भागमा राखिएको छ "बीमा 2: 1 भुक्तानी गर्दछ"। यदि डीलरले ब्ल्याक ज्याक छैन भने, बीमा शर्त हो हराएको, र तपाईं आफ्नो हात खेल्न जारी राख्नुहुन्छ। यदि डीलरले कालो ज्याक गरेको छ भने, तपाईंको प्रारम्भिक शर्त र हात हराएको छ। तथापि, तपाईले आफ्नो बीमा शर्त जित्नुहुन्छ,2को भुक्तानको साथ: 1।
मानक विकल्प: हिट र स्ट्यान्ड
ब्लैकज्याकमा मानक छनौटहरू हिट र StandEach प्लेयर हो भने पछि "हिट" विकल्प छ, अर्को कार्ड लिन वा "एक्स" मार्फत आफ्नो2कार्डहरूमा स्कोर। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि विकल्प विकल्प छनौट गर्ने हो भने, तपाइँ हाम्रो समर्पित ब्ल्याकज्याक रणनीति पृष्ठमा थप सल्लाह पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईं कार्डहरू गर्न सक्नुहुने कार्डहरूको कुनै सीमा छैन। तपाई प्रायः पत्ता लगाउनुहुनेछ कि तपाईसँग2वा3कार्डहरूसँग पर्याप्त अंकहरू छन्। यद्यपि यो केही उदाहरणहरूमा5कार्डहरू बिना बस्टिङ गर्न आकर्षित गर्न सम्भव छ। एकपटक तपाईले खडा गर्ने निर्णय गरेपछि यद्यपि अब कार्डहरू तान्नुहोस्, तपाइँले अन्य खेलाडीहरूलाई आफ्नो हात खेल्न पर्खनु पर्दछ। यो एकपटक मात्र हो सबै अन्य खेलाडीहरुले आफ्नो पालो पूरा गरेको छ कि डीलरले आफ्नो छेद कार्ड बन्द गर्दछन्। त्यसपछि उनीहरूले अर्को कार्ड लिने वा निश्चित नियम अनुसार खडा गर्नेछन्।
विभाजित र डबल
खेलाडीहरूलाई दुई थप विकल्पहरू खुला छन् - "विभाजित" वा "डबल"। तथापि, त्यहाँ यी विकल्पहरू उपलब्ध हुँदा सीमाहरू छन्।
एक समान मानसँग कार्डहरू2ह्यान्ड्समा विभाजित हुन सक्छ अतिरिक्त बेल्टमा राख्नुहोस् यदि तपाईंको पहिलो2कार्डहरू बराबर मूल्यको हुन्छन्, यसमा2फरक अनुहार कार्डहरू समावेश छन्, त्यसपछि तपाइँसँग दुई अलग हातहरूमा कार्डहरू विभाजित गर्न छनौट गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि, तपाईंलाई अर्को शर्त आवश्यक छ, तपाईंको पहिलोको बराबर। त्यसपछि तपाइँ एकअर्कालाई स्वतन्त्र रूपमा प्रत्येक खेल खेल्न जारी राख्नुहुन्छ। तपाईं चाहानुहुन्छ जस्तो कि तपाईं चाहानुहुन्छ जुन धेरै कार्डहरू प्रत्येक हातमा आकर्षित गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँसँग फेरि विभाजन गर्न विकल्प छैन। यो विकल्प बजाउँदा, एकेस र अनुहार कार्डले 21 बराबर, कालो जैक बराबर छैन। यसैले, यस्तो हातको लागि भुक्तानी 1: 1,3भन्दा बरु हुनेछ: 2।
पहिलो2कार्डहरू निलम्बित भएपछि, प्लेयरसँग तिनीहरूको शर्त दोहोर्याउन विकल्प छ। यसले अधिकतम तालिका सीमा पार गर्न शर्त सक्षम गर्न सक्छ। एक पल्ट "डबल" को चयन गरे पछि, केवल 1 कार्ड को लागी अधिक कार्ड छ। अर्को पटक हिट गर्न कुनै विकल्प छैन। डबल डाउन गर्न विकल्प विभाजित हातहरूमा पनि उपलब्ध छ, तर फेरि, केवल 1 अतिरिक्त कार्ड प्रति हातमा लगाइनेछ।
डेलरका लागि कार्ड ड्राफ्ट नियम र विन्निङ भुक्तानी
एकपटक सबै खेलाडीहरूले आफ्नो टर्न पूरा गरेपछि, डीलरलाई आफ्नो हात खेल्नको लागि समय हो, र अन्ततः खेलको नतिजा निर्धारण गर्नुहोस्। डीलरले हिट वा खडा गर्ने सन्दर्भमा कडा सेट नियमहरू पछ्याउनु पर्छ, र संक्षेपमा, डीलरले आफैलाई कुनै पनि वास्तविक विकल्प छैन। सुरू गर्न, डीलरले लुकेको जूता कार्ड सकियो। यदि कार्डहरूको मान 17 भन्दा कम छ भने, त्यसपछि तिनीहरू अर्को कार्ड खिच्नु पर्छ। तपाईले वास्तविक ब्ल्याक ज्याक तालिकामा यो नियम देख्नुहुनेछ। यो सामान्यतया व्यक्त गरिएको छ "डीलर सबै 17 मा खडा हुनुपर्दछ"। जेनेरिक एक्सएनएक्सक्स भन्दा बढी छ भने, तिनीहरू खडा हुनेछन्। यदि डीलर बस्ट हो (यद्यपि एक्सटेन्सनले 17 भन्दा बढी छ), त्यसपछि अन्य सबै बाँकी खेलाडीहरू स्वचालित रूपमा जित्न सक्नेछन्। यदि डीलरले 21 - 17 को बीचमा छ भने अंक अन्य खेलाडीहरूको तुलनामा हो।
???? 635% जम्मा जमा बोनस
???? Eur 665 Online Casino Tournament
???? $ 845 टूर्नामेंट
💵 $ 545 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 € 310 मुक्त चिप
💵 पाउन्ड 130 फ्री कैसीनो चिप
💵 230 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 135% कैसीनो स्वागत बोनस
💵 $ 4785 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 पाउन्ड 690 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 EURO 170 फ्री चिप
💵 EUR 77 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 Eur 645 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 170% कैसीनो स्वागत बोनस
💵 € 785 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 पाउन्ड 3865 जम्मा जम्मा कैसीनो बोनस
💵 EUR 510 कैसीनो चिप
💵 $ 1445 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 EUR 135 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 725% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 पाउन्ड 585 टूर्नामेंट
💵 130 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 € 855 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 पाउन्ड 265 नि: शुल्क चिप
💵 $ 80 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 यूरो 970 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 155 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 111 फ्री चिप कैसीनो
💵 यूरो 650 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 115 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 160 फ्री स्पिन क्यासिनो
💵 £ 1675 जम्मा रकम बोनस छैन
💵 185 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 € 130 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 205 मुक्त स्पिन क्यासिनो
💵 € 330 कैसीनो चिप
💵 £ 1930 जम्मा रकम बोनस कोड
💵 22 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 यूरो 960 कैसीनो टूर्नामेंट
💵 EUR 60 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 835% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 800% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 पाउन्ड 385 नि: शुल्क नगद
💵 यूरो 590 फ्री कैसीनो टिकट
💵 $ 480 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 $ 3115 जम्मा बोनस छैन
💵 पाउन्ड 100 फ्री कैसीनो चिप
💵 € 3445 जम्मा बोनस कोड
💵 € 710 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 पाउन्ड 2760 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 510% स्वागत बोनस
💵 यूरो 2390 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 यूरो 120 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 $ 370 कैसीनो चिप
💵 250 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा छैन
💵 $ 4705 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 € 205 फ्री चिप
💵 पाउन्ड 265 निःशुल्क चिप
कीमिया को रहस्यमय, एस्टोरिक र कलात्मक पहलुहरु को अन्वेषण गर्नुहोस्। मान्य उपचार गर्न सक्ने उल्लेखनीय उपचारको सिर्जनाकर्ता बन्नुहोस् ...
सुपर डायमंड खान एक बोनोडा कस्टम सफ्टवेयर बाट एक 5-रेल भिडियो स्लॉट विस्फोटक हो। खेलले एकको भावनालाई जोड दिन्छ ...
कहिलेकाहीँ, एक जोकर सजिलो छैन! डबल जोकरले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछ र उनीहरूका इमर्सिभ स्पिनको लागि धेरै धेरै ...
उहाँले मिस्रियनहरू लास वेगासमाथि कब्जा गर्दै हुनुहुन्छ, र तिनीहरू तपाईंलाई महाकाव्य अधिवेशनको भाग हुन चाहन्छन्। सामेल हुनुहोस् ...
आधारभूत इन्स्क्ले स्लॉट खेल समीक्षा। उत्तेजित आधारभूत प्रविधि मजा स्लॉट मिसिन तीन पङ्क्तिहरू, पाँच रिलेहरूसँग आउँछ। ... ...
Play'n GO गोल्ड किंग भिडियो स्लॉट को सुनहरा रील स्पिन गर्दा पिकर्सहरूले मेडास टच महसुस गर्न सक्थे ...
मौन समुराई खजाना
धेरै स्लॉट खेलाडीहरूले एशियाई संस्कृति वा जापानको ऐतिहासिक समुराई योद्धाहरू र गीशा मनोरञ्जन र सफ्टवेयरबाट प्रेरित खेलहरूलाई प्रेम गर्छन् ...
प्रिय देवताहरू, ध्यान दिनुहोस्, कृपया! तपाईं लस एन्जलसबाट पुरुष स्ट्रिपर्सको ब्यान्डसँग मनाउनुहुनेछ। तिनीहरूले महिमा गरे ...
भगवानहरूको युद्ध Playtech सफ्टवेयरबाट एक एक्शन प्याड भिडियो स्लॉट हो। खेल ग्रीक द्वारा प्रेरित छ ...
स्लॉटको पृष्ठभूमि रातो हो जुन चिनियाँ व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै भाग्यशाली रंग मानिन्छ।
Oink देश प्रेम
यो सामान्यतया भनिएको छ कि यदि तपाई सही शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्न भने त्यस पछि, जब संगीत आउँदछ ...
समुद्री डाकू उनको खजाना को पालन गर्नुहोस र Goldbeard मा ठूलो जीत। Goldbeard एक पाँच-रिल हो, 20-payline भिडियो स्लॉट पनि ...
रोबिन हुड धन परिवर्तन गर्दै
रोबिन हूड: रिचिंग ™ रिचिंग ™ एक5रील,3पङ्क्ति, 20 betline भिडियो स्लॉट € 100 को अधिकतम शर्त संग ...
मिनी रूले अमेरिकन वा युरोपेली रूले भन्दा बढी खेलाडी-अनुकूल बिट संरचनाको साथ एक लोकप्रिय तालिका खेल हो। यदि तिमी ...
थन्डरकिक विकासकर्ताहरूले मेक्सिको भ्रमण गर्न र शानदार लुम्बिनी युद्धहरू हेर्ने संसारमा जुआरीहरूलाई निमन्त्रणा दिन्छन्! Luchadora अनलाइन ...
हामी दुवैलाई अनलाइन स्लट खेलहरू र पोकरका राउन्डहरू पनि प्ले गर्न मन पराउँछौं, किनकि हामी हामीसँग हौं ...
Fei Long Zai Tian एक आकर्षक चीनी विषयवस्तुको साथमा एक शानदार अनलाइन भिडियो स्लॉट हो। सांस्कृतिक विविधताको अर्को उदाहरण ...
ब्लेक अपडेट गरिएको: जनवरी 22, 2019 लेखक: आमिर Berrey
3.0.0.0.1 Alchemists प्रयोगशाला
3.0.0.0.2 सुपर हीरा खानी
3.0.0.0.3 चिनियाँ रूले
3.0.0.0.4 डबल जोकर
3.0.0.0.5 टोटोन कार म्यान
3.0.0.0.7 यूरोपीय रूले प्रो
3.0.0.0.8 आधारभूत प्रवृत्ति
3.0.0.0.9 Punto banco
3.0.0.0.10 सुनको राजा
3.0.0.0.11 महासागर राजकुमारी
3.0.0.0.12 जादू को छडी
3.0.0.0.13 साँचो भ्रमहरू मोबाइल
3.0.0.0.14 मौन समुराई खजाना
3.0.0.0.16 देवताहरूको युद्ध
3.0.0.0.17 गंग पाउ
3.0.0.0.18 Oink देश प्रेम
3.0.0.0.20 रोबिन हुड धन परिवर्तन गर्दै
3.0.0.0.21 मिनी रूले
3.0.0.0.23 चिसोका राजाहरू
3.0.0.0.24 Fei long zai tian